यसरी बन्यो अन्तिम विकल्प .... | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more यसरी बन्यो अन्तिम विकल्प ....
यसरी बन्यो अन्तिम विकल्प ….
माघ २६ गते, २०७४ - १७:४६
काठमाडाै । बबी तामाङ, तेस्रो लिंगीः छोरो भएर जन्मे । हुर्कदै जाँदा छोराको भुमिका निर्वाह गर्न सकिनँ । सबै चाहना छोरीको जस्तो भयो । छोरीकै गर्न कपडा लगाउन थालेँ । छोरा मान्छे मन पर्न थाल्यो । घरपरिवार तथा समाजमा गिज्याउने पात्र बनाए ।
हेला र गलत दृष्टिकोणले हेर्न थाले । प्रकृतिले त्यस्तो बनायो, यसमा हाम्रो के दोष ? पढ्दै थिएँ, शिक्षक र साथीको हेलाले पढ्न छोड्नु पर्यो । अभिभावकले गाली गरेर घरबाट निकाले । कहाँ जाने के गर्ने कसैले काम दिँदैन । सरकारले पनि वास्ता गरेन ।
अनि अन्तिम विकलप बन्यो देहव्यापार । एक दुई हजार रुपैयाँका लागि चिसोमा बस्न कसलाई रहर लाग्छ र तर बाँच्नको लागि खान लाउन त पर्यो नि । काम गर्ने अवसर पाए गथ्र्यौँ । मौका पाउनेले गायक, मोडल, व्यवसाय बनेका छन् ।
सरकारले पनि तेस्रो लिंगीका लागि केही सोच्नुपर्छ । आफैलाई बेचेर जीवन चलाउँदा नि सुख छैन । पुलिसे लैजान्छ, हप्ता दिन राखेर दसपन्त्र्र हजार धरौटीमा छोड्छ । फेर त्यो पैसा तिर्न सडकमै जानुपर्छ ।
सकारले केही व्यवस्था गरिदिए यौन पेसा त्याग्ने थिए । पत्रकार हामीसंग ग्राहक बनेर आउँछन् । हाम्रो कामका बारेमा यस्तो, उस्तो गर्छन, समाज विगार्छन् भनेर समाचार लेख्छन् । तर समस्या सकाधान के गरेर हुन्छ भनेर लेख्दैनन् ।
माघ २६ गते, २०७४ - १७:४६ मा प्रकाशित